Uyenza njani into yokulumkisa ixesha kwi-Apple Watch yakho | Ndisuka mac
Indlela yokuqalisa izilumkiso zexesha kwi-Apple Watch yakho
Enye yeendlela esinokuzifumana kwi-Apple Watch kwaye ngokuqinisekileyo abasebenzisi abaninzi abazi ukuba zeziphi izilumkiso ngeyure. Lo msebenzi ubuyisela abasebenzisi abaninzi "emva kwexesha" ngamanye amaxesha sisebenzisa enye yezoowotshi zeCasio zilula.
Lo msebenzi usebenze ngokuthe ngqo isaziso ngeyure nganye, ke xa ilixa liphelile iwotshi iya kukhupha ukungcangcazela okuncinci kunye nesandi esinokuthi sizenze ngokwezifiso. Ezi zandi ngoku zimbini, enye yeentsimbi kunye nenye yeentaka.
Ungazivula njani izilumkiso ngeyure
Ilula kakhulu kwaye inokwenziwa ukusuka kwiwotshi ngqo ukuze ungachukumisi i-iPhone. Ukwenza lo msebenzi sikwazi ukufikelela kuseto ukusuka ekubukeni ngokwalo njengoko besitshilo ekuqaleni kunye nokufikelela ngqo kuFikelelo.
Nje ukuba ngaphakathi ngaphakathi into ekufuneka siyenzile kukuhla de ufikelele kukhetho izilumkiso ngeyure emva koko uzenze zisebenze. Nje ukuba sisebenze sinokucofa kwizandi kwaye ukhethe phakathi kokukhetha Iintsimbi okanye iintaka. Ungahlela izaziso kwifayile ye- ishedyuli ukhetho, Esinika izaziso yonke iyure, yonke imizuzu engama-30 okanye yonke imizuzu eli-15. Ngamaxesha akhethiweyo iwotshi iya kukhala.
Ngaphandle kwamathandabuzo oku indlela elungileyo yokuqonda ukuba lidlula ngokukhawuleza kangakanani ixesha Kwaye kunjalo njengoko isenzeka kum, ngokuqinisekileyo uninzi lwenu luphulukana nembono yexesha ngomsebenzi omninzi, ukuzonwabisa, njl.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Indlela yokuqalisa izilumkiso zexesha kwi-Apple Watch yakho
Ngaphandle kokufuna ukwazi, yeyiphi imitya oyibekayo kwisithuba esingwevu?
Ukufuna intsomi: Isiqendu sebhonasi seRaven's Banquet ngaphambi kwexesha le-XNUMX iphambili
Umceli mngeni woSuku loMhlaba kunye noMceli mngeni woSuku loMdaniso